Shirkii Jaraa’id ee uu maanta qaban lahaa Ljungberg oo dib loo dhigay & Xilliga ay Arsenal ku dhawaaqayso Macallinkeeda cusub ee Mikel Arteta oo la shaaciyey – Gool FM
(London) 19 Dis 2019. Shirkii Jaraa’id oo uu qaban lahaa maanta oo Khamiis ah Tababare Ljungberg ayaa dib loo dhigay, iyadoo kooxda Gunners ay qarka u saaran tahay inay xaqiijiso macallinkeeda cusub ee Mikel Arteta.
Tababaraha ku meel gaarka ah ee Freddie Ljungberg ayaa lagu waday in galabta oo Khamiis ah su’aalo lagu weydiiyo shirka jaraa’id ee ka horreeya kulanka Arsenal ay Sabtida la ciyaarayso Everton, laakiin taas hadda dib ayaa loo dhigay ilaa berri.
Arteta ayaa caawiye tababare u ah Pep Guardiola iyo Manchester City, kabtankii hore ee Arsenal ayaa wadahadallo kula jiray Gunners isbuucan, waxaana uu u muuqdaa inuu la wareegi doono shaqada garoonka Emirates, waxaana lagu dhawaaqi doonaa ka hor bilowga isbuuca soo socda.
Arteta ayaa xalay joogay kulankii ay Kooxda Manchester City 3-1 uga adkaatay naadiga Oxford United ee siddeed dhammaadka Carabao Cup.
Si kastaba ha ahaatee, Macallinka Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyey horraantii todobaadkan in ninka reer Spain uu wadahadallo kula jiray Arsenal kuwaasoo ku aaddan sidii uu joogto ugu noqon lahaa tababare si uu u bedelo Ljungberg.
Shirkii jaraa’id ee su’aalaha lagu weyndiin lahaa maanta tababaraha Gunners ee Ljungberg, waxaana lagu wadaa in hoggaamiyahooda cusub ee Mikel Arteta ay magacaabo berri oo Jimce ah.